freedom သုံးနည်း - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
your freedom ဘယ်လို သုံးရတယ်ဆိုတာပါ ရှင်းပြပေးပါလား။
16-07-2008, 11:26 AM
ပြန်စာ - your-freedom
ပထမဆုံး www.your-freedom.net ဆိုတဲ့ ဆိုဒ်မှာ ရီဂျစ်စတာလုပ်ရပါ့မယ်..မိမိမေလ်းထဲကို ဆိုဒ်က စာ ပြန်လာရင် ...သူပေးတဲ့ကုဒ်နံပါတ်ကိုမှတ်လိုက်ပါ ....ပြီးရင်..ပေးထားတဲ့ link အတိုင်း ဆိုဒ်ဆီကို ပြန်သွားပြီး..login လုပ်လိုက်ပါ ..နောက်များမှာထပ်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ..သူပေးထားတဲ့ ကုဒ် နဲ့ဝင်စရာမလိုတော့ပါဘူး...မိမိရီဂျစ်စတာလုပ်ထားတဲ့ ပတ်စ်ဝပ်နဲ့သာ ၀င်ရမှာပါ ..
၀င်လို့ရသွားရင်.. download ဆိုတဲံထဲကို သွားပြီး window Installer ဆိုတာကို ဒေါင်းလုပ်ချရမှာဖြစ်ပြီး ..မိမိစက်မှာ JAVA (ကော်ဖီခွက်ပုံလေးနဲ့)မရှိရင်တော့ JAVA archive့ ဒေါင်းလုပ်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်..ပြီးရင် အင်စတောလုပ်ပါ..ဆော့ဝဲကိုဖွင့်လိုက် ပါ..configure ကို ဖွင့်ပြီး proxy setting နေရာမှာ..မိမိ IE ရဲ့ proxy ကိုထည့်ပါ.. server connection နေရာ မှာ ems.resolution.de လို့ရိုက်ထည့် port က 443
protocol က https အောက်က check box က click တွေ အားလုံးဖြုပ်ပစ်လိုက်ပါ..account Information မှာ မိမိရဲ့ အကောင့်နံမယ်နဲ့ password ရှိနေပြီးဆိုရင်တော့...start connection နှိပ်လိုက်ပါ....mozilla နဲ့ချိတ်မယ်ဆိုရင်...mozilla ရဲ့Network Setting မှာ HTTP proxy ကို localhost ..port ကို 8080 ဆိုပြီးရိုက်ထည့် ပါ...ဒါဆို mozilla ကို yourfreedom နဲ့ သုံးနေပြီးပေါ့....တခြားသူငယ်ချင်းများရှင်းထားတာလဲရှိအုံးမှာပါ ....အဆင်ပြေပါစေကိုအောင်ခန့်
Last edited by maJunior; 16-07-2008 at 11:29 AM..
ဆန်းမောင်, သက်နိုင်, မောင်သံသရာ, bonge, lusoelay987, minthumon, pannuko, sky4ster
ပြန်စာ - Ultrasurf
IE ရဲ့ proxy ကို ဘယ်လိုရှာရမလဲ။ ကျွန်တော် mozilla နဲ့ သုံးတာ။ ကျေးဇူးပါနော်။
16-07-2008, 04:03 PM
ပို့စ် 65 ခုအတွက် 113 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
IE ရဲ့ Proxy က Tools > Internet Option > Connections > LAN Setting မှာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီမှာ သွားပြင်ရမှာပါ။
[SIGPIC][/SIGPIC][SIZE="5"][COLOR="Red"]အင်းဟာ အင်းဟာ[/COLOR][/SIZE] [COLOR="Red"]မှတ်ပြီလား .. [/COLOR] [SIZE="4"]?[/SIZE][SIZE="3"]?[/SIZE][SIZE="2"]?[/SIZE][SIZE="1"]?[/SIZE]
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ မောင်ဘိုတောက် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Visit မောင်ဘိုတောက်'s homepage!
Find More Posts by မောင်ဘိုတောက်
Originally Posted by ကိုအောင်ခန့်
mozilla မှာ Tools > Options >Advanced>Network >setting >Manually proxy မှာ မိမိရဲ့proxy ကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်..
လောလောဆယ်မှာ ..MPT က.. Auto detect နဲ့ အဆင်ပြေစေဘို့ လွှတ်ပေးနေပါတယ်တဲ့....proxy မပါဘဲ ..auto detect ကြီးနဲ့ နှစ်ပါးသွားကြည့်ပါအုံးလား
Last edited by maJunior; 01-09-2008 at 04:14 PM..
၂။google ရဲ့ search box မှာ www.your-freedom.net ဆိုပြီးရိုက်ထည့် ပြီးရင် enter
၃။your freedom ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကျလာရင်သူ့အောက်မှာ download ကိုနှိပ်
၄။access has been denied ပေါ်လာရင် address bar က http ရဲ့နောက်မှာ s ကိုရိုက်ထည့် (https) ဆိုပြီး၊ပြီးရင် enter
၅။ပြီးရင် download type အောက်ကWindows full installer
Runs on any Windows PC (Windows 2000 or newer). Recommended
MD5 sum: 971a5f8748705d5c7b7798408d5b8c73 ဆိုတဲ့ဘေးက download(a country) မှာကလစ်လုပ်ပြီးဒေါင်းလုပ်လုပ်
၆။ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးရင် run ပေးလိုက်
ရ။အိုကေ၊ဆော့ဖ်ဝဲလဲကွန်ပျူတာပေါ်ရောက်ပြီ။စပြီးသုံးမယ်။သေချာလိုက်မှတ်နော်။ဖရီးဒန်းသုံးဖို့အကောင့်လိုတယ်။အဲဒီတော့အကောင့်ဖွင့်ရမယ်။ကဲစောနက freedom webpage အပေါ်ဆုံးမှာ Login ဆိုတာရှိတယ်။သူ့အောက်မှာ First visit? Click here to register. ဆိုတာကို ကလစ်လိုက်ဗျာ
1.username- မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည်ရိုက်ထည့်
2.password- မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ password ရိုက်ထည့်
3.repeat password- မှာကိုယ်ရိုက်ထားတဲ့ password ပြန်ရိုက်ထည့်
4.email address- မှာကိုယ့်အီးလ်မေးလိပ်စာကိုရိုက်ထည့်
5.acceptable use policy ဘေးမှာ check box (လေးထောင့်ကွက်) လေးမှာ uncheck ဖြစ်နေရင် check (ကလစ်နှိပ်ပြီးအမှန်ခြစ်လိုက်) လုပ်
6.first name နံပါတ် 1 ကနာမည်ကိုတစ်ဝက်ရိုက်ထည့်
7.last name မှာကျန်တဲ့နာမည်စာလုံးကိုရိုက်ထည့်
8.address မှာ ကြိုက်တာရိုက်ထည့် ဥပမာ (13,4,yayway cemetry,mingaladon township, rangoon, myanmar) အဲဒီလိုမျိုးပေါ့
9.city မှာတော့ yangon ပေါ့
10.zip code မှာတော့ ထည့်ချင်ရာထည့်
11.country of residence မှာတော့ myanmar ပေါ့ဗျာ
၉.ပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အီးမေးလ်လေးကိုဖွင့် yourfreedom.net ကနေပို့လိုက်တဲ့စာလေးကိုဖောက်၊ပြီးရင်သူပေးထားတဲ့ link လေးကို ကလစ်လိုက် (ဒုတိယမြောက် link အရှည်ကြီး)၊ access has been denied ဆိုရင် http မှာ s ရိုက်ထည့်ပြီးဝင်လိုက်။
၁၀။၀င်လိုက်ရင် username ရယ် authorization code ဆိုပြီးကျလာမယ်။သူပြောသလိုဆက်ပြီးလုပ်လိုက်။
၁၀.ပြီးရင် send password ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်အီးမေးလ်လိပ်စာလေးကိုရိုက်ထည့် (စာလုံးပေါင်းမှန်ပလေ့စေနော်)
၁၁.ပြီးရင်ကိုယ့်အီးမေးလ်ထဲကိုနောက်တစ်စောင်ရောက်လာလိမ့်မယ်။အဲဒါလည်းအဲဒီအတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့မေးလ်အသစ်ကိုဖွင့်ပြီး link လေးကို ကလစ်ပြန်နှိပ်။အဲဒီဒုတိယမြောက်မေးလ်ကဘာမှဟုတ်ဘူး။အာပလာ။
၁၂။ပြီးရင်ကိုယ့်မေးလ်ထဲကိုတတိယမြောက်မေးလ်ဝင်လာမယ်။အဲဒီတော့မှသူကနေကိုယ့်ရဲ့ username ရယ် password ရယ်ကိုပြပေးလိမ့်မယ်။
အဲဒါဆိုရင်အကောင့်ဖွင့်တာပြီးမြောက်အောင်မြင်သွားပြီပေါ့။ (ဖွင့်ရတာခေါင်းစားပါတယ်ဗျာ၊ကျွန်တော် အသင့်လုပ်ပြီးသား username ရယ် password ရယ်ပေးမယ်။အဲဒါလေးနဲ့သုံးလိုက်အဆင်ပြေသွားမယ်။ဟဲဟဲ။
အကောင့်လဲရပြီ၊ဆော့ဖ်ဝဲလဲရပြီဆိုတော့ စပြီး use ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။အဟေးဟေးဟေး။
ကဲကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Mozilla firefox နဲ့ချိတ်တာပဲပြောပြလိုက်တော့မယ်။ကဲစမယ်
၁။your freedom software ကို double click (or) enter ပါ။
၂။your freedom software တက်လာလျှင် status အောက်မှ configure ကိုနှိပ်ပါ
၃။server connection, setting, server selection, accout information, proxy setting, open vpn setting များထဲမှ account information မီနူးကိုရွေးပါ
၄။username နှင့် password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။
၅။ language တွင် english ကိုရွေးပါ။ ( အီတလီလိုတတ်ရင်အီတလီရွေးပေါ့၊တူရကီလိုဖတ်တတ်ရင်တူရကီရွေးပေါ့)
၆။ ပြီးလျှင်အပေါ်မှ sever connection ကိုကလစ်လုပ်ပါ
၇။ wizard ဆိုသော buttom ကိုနှိပ်ပါ။
၈။select protocols ဆိုသော Box ကြီးကျလာလျှင် https ဆိုသော check box မှလွှဲလို့ ကျန်သော check box များအား unckeck (အမှန်ခြစ်ဖြုတ်) ပါ။
၉။ next ကိုနှိပ်ပါ
၁၀။ခနစောင့်ပါ။(တစ်ခါတစ်လေ ၁၀ မိနစ်လောက်တောင်ကြာတယ်။ဟီး။ကျွန်တော့်အိမ်မှာဆိုရင်)
၁၁။found freedom servers ဆိုပြီးကျလာပါလိမ့်မည်။ pref အများဆုံးကောင်ကို select လုပ်ပါ။ ပြီးလျှင် next။
၁၂။ save and exit ကိုနှိပ်ပါ။
၁၃။start connection ကိုနှိပ်ပါ။(ဖရီးဒန်းတံခါးပွင့်လာပါမည်။ ပထမဦးစွာ ? သင်ကေတပြနေပါမည်။ ပြီးလျှင်တံခါးလုံးဝပွင့်သွားပါလိမ့်မည်။(သင်သိရန်သာဖြစ်သည်))
၁၄။Mozilla firefox ကို ဖွင့်ပါ။
၁၅။ tool ထဲမှ option ကိုနှိပ်ပါ။
၁၇။ network ကိုကလစ်ပါ။
၁၉။option box ကို Manual proxy configuration တွင်ထားပါ။
၂၀။ ပြီးလျှင်တွေ့ရသောhttpproxy box တွင် 127.0.0.1 ကိုထည့်ပါ။ Port box တွင် 8080 ကိုထည့်ပါ။
၂၁။အထက်ပါအတိုင်း ssl proxy, ftpproxy gopherproxy socks host ရှိ box များတွင်လည်း 127.0.0.1 ကိုထည့်ပါ။ အိပ်မငိုက်နဲ့နော်။ port တိုင်းတွင် 8080 ထည့်ပါ။
၂၂။use this proxy server for all protocols တွင် uncheck ထားပါ။
၂၃။ option box socks v4 နှင့် socksv5 တို့တွင် soxks v5 မှာထားပါ။
၂၄။no proxy for: box တွင်ဘာမှထည့်စရာမလို
၂၅။automatic proxy configuration URL တွင်ဘာမှထည့်စရာမလို
၂၆။ပြီးရင် ok ကိုနှိပ်
၂၈။ပြီးရင် fire fox address bar မှာ www.google.comဆိုပြီးရိုက်ထည့် enter (ကျမလာသေးရင်ခနခနပြန်လုပ်၊ဖရီးဒန်းတံခါးပွင့်လာလိမ့်မယ်။တံခါးပွင့်လာမှသုံးလို့ရမယ်)
၂၉။ google web page ကြီးကျလာရင်သင်ကြည့်ချင်တာတွေကြည့်လို့ရပြီပေါ့ကွယ်။
password- iloveukokosanphal တဲ့
ကောင်မလေးတွေအတွက်အထူးရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ထားပေးတာပါ။ယောက်ျားလေးတွေလည်းသုံးလို့ရပါတယ်။ အကောင့်နာမည်နဲ့ password လေးကချစ်ခြာရေးနော်။ဗမာလိုပြန်ရရင်ကိုကိုစံဖဲကို-ျစ်တယ်တဲ့။ကောင်မလေးတွေများများသုံးကြပါစေသောဝ်။အားလုံးပဲပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
အောက်ပါအသင်းဝင် 18 ဦးတို့မှ မောင်ပေါ်ဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုသီလ, နီထွန်းဦး, ပွင့်ဖူးမွန်, သက်တန့်, သန့်ဇင်ဌေး, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်သံသရာ, မောင်အောင်ဟိန်းအေး, အောင်မိုးထွန်း, aaa00234, athaylay1, azp09, g00gle, goldstar, kyawsoeag, minthumon, naychiyoon, thura.it
ပြန်စာ - freedom သုံးနည်း
အစ်ကိုမောင်ပေါ်ဦး နှင့်တကွ အစ်ကို/အစ်မများခင်ဗျာ
ကျွန်တော် your-freedom မသုံးခင်က
IDM ကိုသုံးပြီးFile တစ်ခုခုကို Downရင်
Transfer Rate က အနည်းဆုံး 150 KB/sec ကနေရပါတယ်
650 KB/sec အထိရပါတယ်။
Your-Freedom ကိုသုံးပြီး File တစ်ခုခုကို Downရင်
Transfer Rate က အများဆုံး 15 KB/sec အထိဘဲရပါတော့တယ်။
ဘာဖြစ်လို့များပါလဲ။ အဲဒါ Your-Freedom ကိုနေရင်းအပေါ်ကအတိုင်းTransfer Rate
ကျွန်တော်က MPT ADSL ကိုသုံးပါတယ်။
Last edited by koaungkyaw7; 25-07-2011 at 12:37 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်5ဦးတို့မှ koaungkyaw7 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
နီထွန်းဦး, မောင်သံသရာ, g00gle, goldstar, minthumon
အစ်ကို တို့သုံးတာ free အကောင့်ကိုသုံးတာပါ။ free ဆိုရင်လိုင်းနှေးတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ပေးသုံးမှ လိုင်းက မြန်တာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ victor10 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, g00gle, koaungkyaw7, minthumon
အကိုတို့ရေ ကျွန်တော်ကတော့ freedom ထက် Ultra surf လေးကိုပိုနှစ်သက်မိပါတယ် Ultra surf လေးကိုစမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် ဒီနေရာလေးမှာ ရေးထားပေးပါတယ်။
နီထွန်းဦး, ကျော်ထက်ချိန်, နေမင်းမောင်, မောင်သံသရာ, bagothar85, g00gle, goldstar, koaungkyaw7, minthumon, victor10, zo
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ ဇော်အောင်မျိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဇော်အောင်မျိုး
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ ဖိုးခြူး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by ဖိုးခြူး
ကျွန်တော် က Internet Shop က ပါ Server ဆက်မှာ အကိုပြောသလို အားလုံး အဆင်ပြေပါတယ်
သုံးလို့လဲရပါတယ် ...ကျွန်တော် သိချင်တာ ကServer စက်မှာ run ထားတဲ့ FreeDom ကို ကျန်တဲ့ Clinet တွေကို ပေး သုံးချင်ရင် ဘယ် လို ဆက် လုပ်ရမလဲ ဆို တာ ပြော ပါ လား ခင်ဗျာ
Last edited by tu tu; 10-01-2012 at 06:42 PM.. Reason: edit quote
Find More Posts by သစ်ရွက်
software guide, software howto, your-freedom
Your Freedom ထက်ပိုမြန်တဲ့ Ultra Surf ကိုချာ Software များဆိုင်ရာ409-12-2008 02:58 PM
No Need to install for Freedom and Gtalk..... Infomation Answer Software များဆိုင်ရာ023-07-2008 06:44 PM